दर्लामीको दादागिरी, शिक्षकहरु आतंकित – Rara Khabar
दर्लामीको दादागिरी, शिक्षकहरु आतंकित
सुर्खेत, ११ बैसाख ।
सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर नगरपालिका –१२, का वडासदस्य रामकुमार दर्लामीले अमर ज्योति नमुना माध्यामिक विद्यालय नेवारेका प्रधानाध्यापकलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् ।
बुधवार दिउँसो कार्यकक्षमै पुगेर उनले प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापालाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन । आफुले भनेको काम नगरेको भन्दै दर्लामीले आफुमाथी हातपातको प्रयास गदै ज्यान मार्ने धम्की दिएको थापाले बताए । सदस्य दर्लामीले प्रवेस परिक्षा नदिएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न वारम्वार अनावश्यक दवाव दिदै आएको पनि बताए ।
आफुले भनेको कुरा नमानेको भन्दै प्रधानाध्यापक थापालाई हातपात गर्न खोजेपछि दर्लामीलाई विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले रोकेका थिए । दर्लामीको हर्कतपछि विद्यालयले संचालन गरेको विद्यार्थी भर्ना अभियान समेत प्रभावित भएको विद्यालयले जनाएको छ । भर्नाको लागि आवश्यक कागजपत्र नपुगेका र प्रवेस परिक्षा पनि नदिएका विद्यार्थीलाई दर्लामी भर्ना गर्न दवाव दिएका थिए । उनले प्रधानाध्यापकलाई म को हुँ, मैले भनेको नमान्ने, तँ को होस भन्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । उनले केही दिन अघि पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षकलाई कुटपिट गर्ने धम्की दिदै आएको गाउँलेहरुले बताएका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधीले नै विद्यालयमा पुगेर ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि विद्यालयकाक शिक्षक कर्मचारी आतंकित भएका छन् । उनीहरुले सुरक्षाको माग गदै प्रहरी प्रशासन गुहारेका छन् । जीउज्यानको सुरक्षा गर्न माग गदै बीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिएको जनाएका छन् । यता विद्यालयले भने प्रवेस परिक्षा नदिएका विद्यार्थीलाई पनि कसरी भर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भैइरहेको जनाएको छ ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फनिन्द्रमणी पोख्रेलले धम्की दिने व्यक्तिलाई कारवाहीको लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताए । सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख बसन्त रजौरेले अहिलेसम्म उजुरी दर्ता नभएको भन्दै उजुरी दर्ता हुन वित्तिकै कानुनी कारवाही गरिने बताए ।
यता वडासदस्य दर्लामीले भने आफुले प्रधानाध्यापकमाथी अभद्र व्यवहार नगरेको दावी गरे । उनले भने म जनप्रतिनिधी भएकोले मेरो वडाको विद्यालय जान नपाउने ? यदि मैले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भए, प्रधानाध्यापकले पुष्टी गर्नुहुन्छ होला त ?
नेपाल राष्टिय शिक्षक संगठनको आपत्ति
प्रकाशित मितिः ११ बैशाख २०७६, बुधबार १७:५१